बच्चालाई गल्तीबाट सिक्ने मौका दिऊँ
मेरा दुई बच्चा छन्, १० र ४ वर्षका। छोरी र छोरा हुन्, तर छानेर जन्माएका होइनौँ। यस लेखमा १० वर्षमा हामीले के–के गर्दा नानीहरू आज कस्ता छन् भन्ने साधारण गतिविधिलाई पस्किने प्रयास गरिएको छ।
हाम्रा छोराछोरी ‘सेन्टर अब युनिभर्स’ सबै थोकका केन्द्रविन्दु होइनन्। बच्चाले भनेका सबै थोक हामीले पुर्‍याउन सकेनौँ, सके पनि पुर्‍याएनौँ।
छोरी ५ वर्षकी हुँदा आफन्तको घरमा भएकोजस्तै रातो खेलौना गाडी, जसलाई त्यतिबेला २५ हजार हाराहारी पथ्र्यो, त्यो नकिनिदिँदा दम्पत्तिबीच ठाकठुक नै भयो। त्यस घटनाले हाम्रा सीमितता र प्राथमिकता छनोटमा राम्रो बल मिल्यो। हाम्रा योजनामा बच्चाले ठाउँ पाएका छन्, तर उनीहरू हरेकपल्ट केन्द्रविन्दुमा छैनन्।
केटाकेटीबाहेक पनि हामीले आफ्ना लागि ‘प्राइभेट टाइम’ निकालेका छौँ। कफी डेटमा जान्छौँ। पानी परेका बेला गाडीमा हुँइकिँदै रानीवन पुगेर फर्किन्छौँ। त्यतिबेला दुवैलाई राम्ररी भनेर जान्छौँ। झगडा गर्दैनन्। हामीलाई किन छोडेको भनेर रिसाएका छैनन्।
१० वर्षीया छोरीलाई हामीले बिताउने प्राइभेट टाइमका बारेमा विगत ४ वर्षदेखि राम्ररी भन्ने गरेका छौँ। अब संस्कारकै रूपमा विकास भएको छ। भाइलाई उनैले बुझाउँछिन्। एकल परिवारमै बस्ने भएकोले व्यवस्थापन भने हामीलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ।
हाम्रो प्राथमिकतामा बच्चाको ‘पर्फेक्सन’ परेको छैन। पर्फेक्ट हुन खोज्दा नानीहरूलाई समस्याबाट भाग्ने बानी पर्ने रहेछ। दुवैजना शिक्षण पेशामा भएकोले आफ्ना नानीहरू सबै थोकमा अब्बल भए हुने भन्ने चाह त हामीसँग छ, तर त्यसलाई हावी हुन दिएका भने छैनौँ।
केटाकेटीबाहेक पनि हामीले आफ्ना लागि ‘प्राइभेट टाइम’ निकालेका छौँ, कफी डेटमा जान्छौँ। त्यतिबेला दुवैलाई राम्ररी भनेर जान्छौँ। झगडा गर्दैनन्। हामीलाई किन छोडेको भनेर रिसाएका छैनन्।
परिणामलाई भन्दा प्रयासलाई महत्त्व दिएका छौँ। छोरीका शिक्षक समूहमा कुरा गर्दासमेत काम गर्ने लगनशीलता, कोसिस गर्ने जाँगर, धैर्यबारे मात्रै कुरा गर्छौँ। गणित विषयमा ‘ए प्लस’ किन आएन भनेर सोध्दैनौँ।
घरमा उनले काम गर्दा अचारमा अमिलो किन बढी हालेको भनेर झपार्दैनौँ। भाँडा माझ्दा पानी पोखियो भनेर गाली पनि खान्नन्, गरेर सिक्ने हो भन्ने परेको छ।
गल्ती गर्न ‘प्रेरित’ गर्छौँ तर सुरक्षासम्बन्धी गल्तीहरूमा सचेत गर्ने गरेका छौँ। छतमा खेल्दा, विद्युतीय उपकरणसँग चल्दा, बाटोमा हिँड्नका लागि निश्चित लिमिटेसन बनाइएको छ। भाइका विषयमा उनी आफैले सतर्कता अपनाउँछिन्।
अरूलाई हानी हुने गल्ती नगर्न भने राम्ररी बुझाउन फागु पूर्णिमाको एक घटनाले काम गर्‍यो। एकजना छिमेकीलाई अफिस निस्किने बेला बेलुन पानी हानिछन्, नराम्ररी कपडा भिजेछ! सरकारी कर्मचारीलाई जगेडा ड्रेस धोएको अनि अर्कै कपडामा अफिस जानु परेको कुराले उनलाई खुबै पछुतो परेछ।
विज्ञान विषयमा भोल्क्यानोसम्बन्धी प्रोजेक्ट गर्दा चुन पानी उम्लिएर उनको ओछ्यान, कपडा भिजेकाजस्ता गल्तीबाट सिकिरहेकी हुनाले यस्ता गल्ती उनले गरिरहन पाँउछिन्।
हामीले बच्चाहरूलाई हाम्रा दुःख लुकाएका छैनौँ।
छोरीको ८ औँ वर्षको जन्मदिनमा हामीले केही पनि गरेनौँ! मेरो स्वास्थ्य बिग्रिएको, आर्थिक अवस्थासमेत लथालिङ्ग भएकोले बुढाबुढी सल्लाह गर्‍यौँ। छोरीसँग सल्लाह गर्‍यौँ, जे थियो त्यही भन्यौँ। सक्ने/नसक्ने, हुने/नहुने सबैकुरा खुलस्त भनेपछि उनीहरूले बुझ्ने रहेछन्।
उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न दिएका छैनौँ। ४ वर्ष मात्रै टेकेको छोराले समेत पजलको झोला खेलिसकेपछि पहिलेकै ठाउँमा नराखुञ्जेल दिदीले बाहिर जाने ढोका खोल्दिनन्। घर सफा गर्दा ४ जनाले नै सकेसम्मको जिम्मेवारी लिन्छौँ। बेलुकी खानापछि भान्छाको सरसफाइमा सबै मिल्नैपर्छ। सागमा पानी हाल्दा, गमला सफा गर्दासमेत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ।
पारिवारिक मूल्यमान्यतामा आधारित भएर ‘फेमिलि भ्यालुज’ तयार गरिरहेका छौँ। के कुरामा सम्झौता गर्न हुन्न भन्ने कुरा १० वर्षकी छोरीसँग बसेर बनाएका छौँ।
‘डिनर टेबल डिस्कसन’ (खाना तयार भएपछि खानुअघिको समयमा हुने छलफल)हरू गर्छौँ। यस्ता छलफलमा छोरीले देखेका, सुनेका, हामीले सुनाउन चाहेका सबै विषयमा एउटा एजेन्डामा कुराकानी हुन्छ। हात उठाएर आफ्नो पालो मागेर कुरा राख्न पाइन्छ, सबैको हैसियत समान हुन्छ।
असोज १ गते भएको छलफलपछि छोरीले आफ्नोे जन्मोत्सवमा खर्च गर्ने ५० हजार रूपैयाँ पठन संस्कृति विकासका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरिन्! शान्ति, परिश्रम, इमानदारी, प्रेम र सदाचार हाम्रा ‘भ्यालु वर्ड्स’मा पारिएको छ। सन्तुष्टि र सहअस्तित्व ‘सेन्ट्रल थिम’ बनेको छ।
डिसिप्लिन (अनुशासन) र पनिसमेन्ट (सजाय)का बारेमा हामी कन्फ्युज छैनौँ।
भदौको एक साँझ पिजा खुवाउन जाने भइयो। हाम्रो सर्त थियो— गाडीभित्रै बस्नुपर्ने! रेस्टुरेन्टका वेटरहरूले गाडीमा ल्याइदिएको पिजा हामीले पार्किङमा बसेर खाने।
भएछ के भने, छोरीले मास्क र स्यानिटाइजर झोलामा नहाली बाहिर निस्किन नपाउने आफ्नै नियम भुलिछन् र अब आत्मअनुशासनको नियमअनुसार पिजा घर आएपछि मात्रै खान मिल्यो भने त्यो दिनको आइसक्रिम उनले पाइनन्।
यसो हुँदा नजानिँदो गरेर बच्चाले बाबुआमामा राख्ने मायालु हैकम नचल्दो रहेछ। उनीहरू ‘ओभरपावर्ड’ हुन पाएनन्।
हाम्रो प्राथमिकतामा बच्चाको ‘पर्फेक्सन’ परेको छैन। पर्फेक्ट हुन खोज्दा नानीहरूलाई समस्याबाट भाग्ने बानी पर्ने रहेछ।
हाम्रो परिवार आदर्श परिवार होइन। आदर्श हुने हाम्रो प्रयास नै छैन। आमाबाबु भएर बिताएका एक दशक र शिक्षक भएर बिताएका दुई दशकले साधारण जीवनशैली पछ्याउने कोशिसलाई भने बल मिलिरहेकै छ।
सानै उमेरदेखि छोरीलाई कथाका किताबहरू पढिदिने बानीले अहिले उनी त पढन्ते, किताबको किरो बनेर निस्केकी छिन्। भाइलाईसमेत तोतेबोलीमै किताबको लत लगाइदिएकी छिन्। त्यसको असर हामी बाबुआमासमेत वर्षको २०–३० किताब पढ्नैपर्ने बाध्यतामा छौँ। टिभी र ग्याजेटमा हाम्रा बच्चा पनि झुन्डिएकै छन्, तर हेर्ने च्यानल फरक पर्ने रहेछ। गुगलमा खोज्ने साइट फरक पर्ने रहेछ।
आजका दिनसम्मको बुझाइमा, बच्चालाई तुलना अर्कासँग नगरिदिने हो भने आफुले पूरा नगरेको सपना पूरा गरिदेओस् भन्ने नसोचिदिए र बच्चै रहन दिई गल्ती गर्न दिने अनि गल्तीबाटै सिक्न दिने हो भने तिनको पुस्ता गजबको पुस्ता बन्ला। सहकार्यमुखी पुस्ता बन्ला। सहअस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकार्ने पुस्ता बन्ला!
प्रकाशित: आईतबार, कात्तिक १६, २०७७ १४:४३
बच्चालाई हरेक कुरा प्रयोगात्मक ढंगमा नै गर्न दिनुपर्छ।
आफूले भनेर सिकाउनेभन्दा उनीहरूले आफै गरेर सिक्दा लाभदायी हुन्छ।
घरपरिवारमा रहँदा सबैको समान अस्तित्व हुनुपर्छ।
बच्चाहरूलाई आफ्नो समस्या लुकाउनुभन्दा उनीहरूसँग खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ।
अफगानी सुरक्षा कारबाहीमा ९ तालिबान लडाकू मारिए
बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ १५:२६